के रास्ट्रपति को छोरी हुनु अपराध हो ?
मंगलबार भदौ २९ , २०७२
टोल को चौर मा एुउटा टेन्ट् मुनी पहाडे, मधेशी , बाहुन , दैलित सबै मिलेर बसेका थियौ, दुख सुख मिलेर बाडेका थियौ । के टेन्ट् मुनी एक भएर आश्रय लिए जस्तै हामी एक देश भित्र एक भएर बस्न सक्दैनौ ?
म मानब हुँ, महिला हुँ, एसियन हुँ, साउथ एसियन हुँ, नेपाली हुँ , मधेसी हुँ, जनकपुर को यादव हुँ ! म मानवता को लागि लडाई गरु कि जात र वर्ग को लागि ? ल तपाईं नै भन्नुहोस सकारात्मक सोचको लागि हामी तल बाट माथि जाने कि , माथि बाट तल ओर्लने? मेरो मधेसीपन, मधेसी सस्कार, मधेसी सस्कृति र यादव थर कसैले खोसेर लान सक्देन तर अरु धेर्रै कुरा छन् जो हराएर, बेचीएर, टुक्रीएर जान सक्छन। मलाई मधेसी हुनुमा धेरै गर्व छ तर त्यो भन्दा पनि बढी नेपाली हुनुमा गर्व छ ।
केहि महिना अगाडी भुकम्प गयो, विश्वभर का मानिस ले हामी प्रती सम्बेद्ना अनि सहयोग गरेका थिए । नेपाली का लागि त्यो समय एस्तो थियो जुन समय कसैले यो सोधेन कि तिमी पहाडे हो , तिमी मधेशी होउ , थारु हौ , दलित हौ। त्यती बेला एक मात्र भावना थियो हामी बिच नेपाली को, मानवता को । टोल को चौर मा एुउटा टेन्ट् मुनी पहाडे, मधेशी , बाहुन , दैलित सबै मिलेर बसेका थियौ, दुख सुख मिलेर बाडेका थियौ । के टेन्ट् मुनी एक भएर आश्रय लिए जस्तै हामी एक देश भित्र एक भएर बस्न सक्दैनौ?
म त समाजशास्त्र को विद्यार्थी , मेरो लागि कुनै समाज फरक हुदैन। समाज सेवी को काम कुनै पनि राष्ट्रको समाज तथा समुदायमा निस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नु लाई बुझिने गरिन्छ l म कुनै दल वा पार्टी संग सरोकार राख्दिन, म महिला अधिकार, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण, महिला-पुरुष बिच विद्यमान असमानता, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार, समानता र सामाजिक र विभेदमा न्यूनिकरण, महिलाको जीवनस्तर वृद्धि जस्ता सामाजिक कार्य मा स्मलग्न छु । के मैले आफ्नो विचार राख्न पाउदिन ? के रास्ट्रपति को छोरी हुनु अपराध हो ?
केही दिन पहिले मैले मेरो व्यक्तिगत बिचार राख्दा धेरै दुख लाग्दा टिप्पणी पढ्ने मौका मिल्यो । मधेश बाट कांग्रेस ५५ , एमाले ४० , एमाओबादी १२ सिट प्रत्यक्ष मा जितेका छन । मधेशी दल हरु १२ स्थान मा जितेका छन । पहाड अनि हिमाल बाट पनि छन् चुनाब जितेर आउने। यदि तपाईं लाइ चित्त बुझेको छैन भने भोट हालेर जिताउनु भएका नेता को घर म़ा गएर ढोका ढक्ढकाउँनुहोस् । एउटा महिलाको आदर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं आफ्नो प्रदेश, आफ्नो देश को लागि के गर्न सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो समाज बाट के आशा गर्ने, केही मान्छे ले बोलेका र लेखेका शब्दहरू यस्ता छन् जस म़ा शालीनता को कुनै आभास भेटिदैन । तपाईं ले बोलेका र लेखेका शब्दहरू प्रति मेरो गुनासो होइन, संस्कारप्रति चित्त दुखेको छ । मेरो बिचार राख्दा कसै माथि प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य रुपमा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा आंच आएमा क्षमा प्राथी छु !
(अनिता यादवको फेशबुक पेजबाट )